AmaBrits athi okusingqongileyo kunye nokuzinza kubalulekile xa ukhetha uhambo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » AmaBrits athi okusingqongileyo kunye nokuzinza kubalulekile xa ukhetha uhambo
I-COP 26, eyenzeka ngexesha elifanayo ne-WTM yaseLondon, iya kuzisa ukuzinza kwi-ajenda yeendaba, kwaye i-shishini lokuhamba lifuna ukuguqula le nzala kwisenzo.
Abahambi abangaphezu kwabathathu kwabane base-UK bathi imo engqongileyo kunye nokuzinza yinto ebalulekileyo xa ukhetha uhambo, ibonisa uphando olukhutshwe namhlanje (ngoMvulo we-1 kaNovemba) yi-WTM yaseLondon.
Ingxelo yoShishino lwe-WTM yafumanisa ukuba i-78% yesampulu eyomeleleyo ye-1000 ihlomele inqanaba elithile lokubaluleka kokusingqongileyo kunye nozinzo. Malunga nomntu omnye kwabahlanu (18%) uthe ibaluleke kakhulu kwaye abanye kwabane (23%) bakhethe ukuba kubaluleke kakhulu.
Kodwa eyona mpendulo ixhaphakileyo kumbuzo ibone ngaphezu kwesinye kwabathathu (38%) iBrits ichaza le miba “njengebaluleke noko”.
Ngakolunye uhlangothi, kusekho i-hardcore yabahambi baseBrithani abahlala bengaqinisekanga, kunye ne-16% ukugxotha ukuzinza njengento engabalulekanga kakhulu kwaye i-7% ithi akukho konke.
Iimpendulo kweminye imibuzo ekwingxelo zikwaveza uninzi lwamaBritane luzama ukuhamba ngenkathalo kodwa kushiyeke iqaqobana elalayo ukumodareyitha indlela yokuziphatha ngokufanelekileyo.
Amanyathelo okuqala kunye nokuziphatha okufana nokusebenzisa kwakhona iitawuli, ukurisayikilisha, kunye nokuzama ukuthenga iimveliso zasekhaya kunye neenkonzo zazidumile phakathi kwesampulu. Nangona kunjalo, i-15% ayizange ibe mathandabuzo kwimpendulo yabo, nto leyo yayikukuba abazange bayithathele ngqalelo imo engqongileyo kwaphela xa behamba.
USimon Press, uMlawuli weMiboniso, i-WTM yaseLondon, uthe: "Ishishini lokuhamba ngokucacileyo linendlela ethile yokuqinisekisa bonke abathengi ngesidingo sokuqala ukucinga nzulu malunga nokusingqongileyo kunye nefuthe elizinzileyo lohambo lwethu.
"I-COP 26, eyenzeka ngexesha elifanayo ne-WTM yaseLondon, iya kuzisa ukuzinza phezulu kwi-ajenda yeendaba, kwaye imboni yezohambo kufuneka iguqule lo mdla ube yisenzo. Ishishini lizibophelele ngokuqinisekileyo ekudlaleni indima yalo ekunciphiseni utshintsho lwemozulu. ”